रेडियो ताप्लेजुङ क्याबिनेटको निर्णय फेसबुकबाट लाइभ गर्छौं !,जंगेले बोल्यो भनेपछि बोल्यो बोल्यो’ भन्ने छैन !
क्याबिनेटको निर्णय फेसबुकबाट लाइभ गर्छौं !,जंगेले बोल्यो भनेपछि बोल्यो बोल्यो’ भन्ने छैन !
मंसिर ३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले अब क्याबिनेट बैठकका निर्णयहरु फेसबुक र ट्विटरबाट लाइभ गरिने बताएका छन् । सरकारले सूचना लुकाएको बारे अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले भने– ‘जंगेले बोल्यो भनेपछि बोल्यो बोल्यो’ भन्ने छैन १ अपवादका घटना भए भने सूचना कसरी दिने भन्नेमा कुनै हार्ड एण्ड फास्ट नीति छैन ।’मन्त्रालयमा विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर क्याबिनेट बैठकका २२ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका मन्त्री बास्कोटाले शुक्रबार बिहान पत्रपत्रिकामा बलि बढी नै नजर दौडाए । क्याबिनेटका निर्णय लुकाएको आरोप खेपिरहेका बास्कोटाको चासो के रहेछ भने आफूले अल्लिो दिन दिएका सूचना पत्रपत्रिका मार्फत जनतामा कति प्रतिशत पुगे, कति लुके ?
हामीले सोध्यौं– ‘उसोभए पत्रकारले नै क्याबिनेटका निर्णयहरु लुकाए र जनसममक्ष पुर्‍याएनन् भन्न खोज्नुभएको हो रु’ जवाफमा पूर्वपत्रकारसमेत रहेका मन्त्री बास्कोटाले भने– ‘सूचना लुकाए त म भन्दिनँ । तर, उहाँहरुले आफ्नो घ्राणशक्ति र थप क्रिएसनमा अलिकति ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’
खासमा तपाईहरुले मन्त्रिपरिषदको सूचनाचाहिँ किन लुकाउनुभएको रु यसबारे जनतालाई छर्लङ्ग पारिदिन मिल्छ ?
क्याबिनेटका निर्णयहरु ‘परिपक्व हुन समय लाग्छ’ भन्नुको अर्थ के हो रु सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुपर्‍यो मन्त्रीज्यू ।
अहिले जसरी उभिएर ५ मिनेटमा ६० वटै निर्णयहरु बताउन सम्भव हुँदैन । ती ६० निर्णयहरुमध्ये भोलिका निम्ति के न्युज हुन सक्छ भन्ने प्रवक्तालाई लाग्छ, त्यो मात्रै मौखिकरुपमा बताइएको हुन्छ । मिडियाका साथीहरुलाई पनि हतार भैसकेको हुन्छ, राति ९÷१० बजेको हुन्छ । कहिलेकाँही राति साढे ११ बजे पनि मैले मिडियालाई ब्रिफ गरेको छु । यसो गर्दाखेरि पत्रकारहरुले पनि ४र५ वटा निर्णयहरु सुनाएपछि ‘आजलाई पुग्यो’ भन्नुहुन्छ । बाँकी निर्णयहरु सुन्ने उहाँहरुमा पनि धैर्यता हुँदैन । ती बाँकी निर्णयहरु जनतामा पुग्दैनन् ।
पत्रकारहरुलाई दिइएको मौका हो यो । त्यसपछि पत्रकारहरुले विषयगत मन्त्रालयको विषयमा पनि प्रवक्ताहरुलाई सोध्न पाउनुहुनेछ । पहिले यस्तो सुविधा थिएन, बैठकस्थल बाहिर उभिएर २र४ वटा निर्णयहरु मात्रै सुनाइन्थ्यो । तर, अब त पत्रकारहरुले सरकारबाट भएका सबै निर्णयहरुमाथि प्रत्यक्षरुपमै प्रश्न उठाउन सक्नुहुने भो ।
सोझै फेसबुकबाट, युट्युव, ट्विटरबाट नागरिकको हात हातमा सरकारका निर्णयहरु पुग्छन् अब । यसमा के लुकाउन खोजेको छ र झन् झन् गुपचुप भनिराख्नुपर्‍यो रु यस्तो आशंका नगर्न म आम जनसमुदायलाई अपील गर्छु । सरकारमाथि आलोचना गर्ने, गल्ती गर्दा सच्याउन दबाव दिने जनतालाई पूर्ण अधिकार छ ।
मन्त्रीज्युले भनेजस्तो क्याबिनेटको सूचना अडियो, भिडियोमै आउने भयो रे, मानौं । तर, बैठक सकिनासाथ सूचना चाहिने पत्रकार र नागरिकहरुलाई तीनरचार दिन पर्खनुपर्दा उकुस–उमुकुस त हुने भयो नि हैन रु तपाई आफैं पूर्वपत्रकार भएको नाताले के भन्नुहुन्छ ?
अनलाइनखबर खबर डट कम